निःशुल्क समय | eactivo | आप्रवासी लागि स्पेनी
24 मार्च, 2013 |3प्रतिकृयाहरु
यहाँ हामीले भिडियो को दोस्रो भाग प्रस्तुत स्कूल हाम्रो केटाहरु, Gonzalo, BEA, Mikel र दाऊद. यस मामला मा हामी आफ्नो स्वतन्त्र समयमा के कुरा र तिनीहरूले ती गतिविधिहरु गरिरहेको मनपर्छ किन.
यो व्यायाम हामी पनि फुर्सदको समय को लागि के प्रश्न खडा गर्न चाहनुहुन्छ? हामी आफ्नो संस्कृति र स्पेन कि बीच मतभेद र समानता पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ. हामी आशा तपाईंलाई रुचि: निःशुल्क समय.
यो भिडियो A1 स्तर लागि हो, तर व्यायाम A2 स्तर लागि हो.
हामीलाई तपाईंको टिप्पणी पठाउन भूल छैन, वा लिखित प्रश्न!
निःशुल्क समय बाट ई-सक्रिय मा Vimeo.
मा प्रकाशित: A2 व्यायाम, Videocast A2
Tags: A2 , लेख्न , सुन्न , स्पेनी , व्याकरण , videocast , शब्द
3 मा प्रतिकृयाहरु “निःशुल्क समय”
क्युबा मा आवास
अप्रिल 13, 2013 गर्न 1:27
धेरै उपयोगी र instructive.
अक्टोबर 24, 2015 गर्न 2:25
कसैले मलाई केटी पहिलो भाग मा भन्छन् कुरा बुझ्न मदत गर्न सक्छ? यसलाई म सुन्न भनेर हो “शिल्प” र “हेर्ने टिभी” तर मामला मा म थियो के बुझ्न प्राप्त / दोस्रो गतिविधि छ.
तिमी धेरै धेरै धन्यवाद!
अक्टोबर 27, 2015 गर्न 11:12
म Delia छु, eactivo दुई शिक्षकहरूको एक. म सहयोग गर्न पाउँदा खुसी छु, तर म एकदम आफ्नो प्रश्न बुझ्न छु.
1. तपाईं धेरै राम्रो सुनेको!, केटी भन्छन्: “शिल्प बनाउन र घर मा टिभी हेर्दै”.
2.म दोस्रो गतिविधि यो छ कि कल्पना “भिडियो हेर्नुहोस्, तिनीहरूले भन्न गतिविधिहरु को नाम सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई तल लेख्नुहोस्”, अधिकार? यो कागजात भने, म व्याख्या:
*पहिलो तपाईं छोराछोरीलाई सुन्न र तपाईं सुनेका गर्नुभएको गतिविधिहरु को नाम लेख्न छ. मात्र केटी, सबै यदि छैन, पनि छोराछोरीलाई.
*त्यसपछि तपाईं सोच्न छ: तिनीहरूले के मतलब? र तपाईं स्पेनिश मा बताउन सक्नुहुन्छ? उदाहरणका लागि: “शिल्प” यसलाई आफ्नो हातले सजावटी काम गरिरहेको अर्थ, उदाहरणका लागि. तपाईं कुनै पनि गतिविधि बुझ्न भने, एक शब्दकोश मा देख वा मलाई सोध्न.
*त्यसपछि के तपाईं आफ्नो खाली समय मा के विचार छ, गरिरहेको जस्तै तपाईं.
कृपया, यसलाई आफ्नो प्रश्न थियो भने, फेरि मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्.
तपाईं धेरै र अभिवादन धन्यवाद,